Goolkii Ronaldo uu ka dhaliyay Sampdoria waxa uu dhulka sare uga booday 2.56 mitir (Daawo)
Mogadishu - 02:19:45
Thursday December 19, 2019 - 22:02:02 in Wararka by Super Admin
Weeraryahanka kooxda Juventus iyo xulka Portugal Cristiano Ronaldo ayaa goolkii guusha ee uu ka dhaliyay Sampdoria 2-1 kulankii ay xalay wada dheeleen waxa uu ahaa gool aad u qurux badan.
Inkastoo Ronaldo uu 34 jir yahay, kuna sii dhowaanayo da’da ciyaaraha lagaga fariisto haddana waxa uu weli muujinayaa awood ahaan iyo farsamo ahaanba uu dhameystiran yahay, waayo goolkii xalay waxa uu dhulka ka booday 2.56 mitir, halkaas oo ahayd meeshii kubadda iyo madixiisu ay ku kulmeen.
Waxaa kaloo yaab lahayd in Ronaldo uu jilibkiisa la ekeeyay markii uu booday daafac 1.80 ah, intii uusan kubadda madaxa ku hertinna uu hawada sare taagnaa muddo ilbiriqsi iyo bar ah, waxaana uu kubadda daba mariyay goolhayaha Sampdoria.
"Goolkaasi wuxuu ahaa mid heer sare ah, maxaa yeelay waxa aan saddexda dhibcood ugu soo hooyay Juventus, mana aan dareemin in aan hawada ilbiriqsi surnaa" ayuu yiri Ronaldo oo dareenkiisa ka dhiibanayay goolkaasi.
Tababaraha kooxda Juventus, Claudio Ranieri ayaa mar uu ka hadlayay qaabkii uu Ronaldo u dhaliyay goolkii Sampdoria waxa uu ku tilmaamay mid uu CR7 u dhaliyay qaabka ciyaarta kubadda koleyga Mareykanka NBA.